Fibebahana, fibebahana ary fibebahana | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny fibebahana (nadika koa hoe "fibebahana") amin'ilay Andriamanitra be famindrampo dia fiovan'ny toe-tsaina, nateraky ny Fanahy Masina ary miorim-paka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny fibebahana dia misy fahatsiarovan-tena amin'ny fahotan'ny tena sy miaraka amin'ny fiainana vaovao, nohamasinina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. (Asan'ny Apôstôly 2,38:2,4; Romana 10,17: 12,2;; Romana) .Fianarana hahatakatra ny fibebahana Fahatahorana lehibe ", dia ny filazalazana tovolahy iray noho ny fahatahorany lehibe fa nahafoy azy Andriamanitra noho ny fahotany miverimberina . "Noheveriko fa nanenina aho, saingy notohizako foana," hoy ny fanazavany. “Tsy fantatro akory raha tena mino aho satria manahy sao tsy hamela ahy intsony Andriamanitra. Na manao ny marina tokoa aho amin'ny fibebahako dia toa tsy ampy izany. ”Andao hojerentsika izay tena dikan'ny filazantsara rehefa miresaka fibebahana amin'Andriamanitra izy. Manao ny lesoka voalohany isika rehefa manandrana mahatakatra ity teny ity amin'ny fampiasana rakibolana ankapobeny ary mitodika amin'ny teny hoe mibebaha (na mibebaha). Mety hahazo fambara aza isika any fa ny teny tsirairay arak'ireo ...
Ny famonjena dia famerenana amin'ny laoniny ny fiombonan'ny olombelona amin'Andriamanitra ary fanavotana ny zavaboary rehetra amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana. Andriamanitra dia manome famonjena tsy ho an'ny fiainana ankehitriny ihany, fa ho mandrakizay kosa ho an'ny olona rehetra izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Ny famonjena dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, azo tanterahina amin'ny fahasoavana, nomena noho ny finoana an'i Jesosy Kristy, tsy mendrika ny tombontsoa manokana na asa tsara. (Efesiana 2,4: 10-1; 1,9 Korintiana 8,21: 23; Romana 6,18.22: 23-1; 1,26: 27-31-1). ​​Ny famonjena - asa famonjena! Ny famonjena, ny fanavotana dia asa famonjena. Mba hanatonana ny foto-kevitry ny "famonjena" dia mila mahafantatra zavatra telo isika: inona ny olana; izay nataon'Andriamanitra momba izany; ary ny fomba tokony hamaliantsika azy. Inona ny olona Rehefa noforonin'Andriamanitra ny olona dia noforoniny "tahaka ny endriny" izy ary nantsoiny hoe "tsara indrindra" ny zavaboariny (Genesisy 2,7 sy). Zavaboary mahafinaritra ny olombelona: noforonina avy tamin'ny vovoka, fa novelomin'ny fofonain'Andriamanitra (Genesisy). Ny "endrik'Andriamanitra" dia mety ahitana ny faharanitan-tsaina, ny famoronana ary ny fahefana amin'ny famoronana. Ary koa ny fahaizana ...
Ny olon-drehetra dia samy manana ny heviny momba ny tsara sy ny ratsy ary samy nanao zavatra tsy nety ny tsirairay - na dia araka ny heviny manokana aza. "Olombelona ny manao diso", hoy ny ohabolana malaza. Samy nandiso fanantenana ny namana ny olon-drehetra tamin'ny fotoana iray, nanitsakitsaka ny fampanantenany, nandratra ny fon'ny hafa. Fantatry ny rehetra fa meloka. Ka tsy te-hifandray amin'andriamanitra ny olona. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantatr'izy ireo fa tsy afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankato azy izy ireo, saingy fantany koa fa tsy nankatò izy ireo. Mahatsiaro ho menatra sy meloka ianao. Ahoana no fomba andoavana ny trosany? Ahoana no fanadiovana ny fahatsiarovan-tena? "Ny famelan-keloka dia avy amin'Andriamanitra", manidy ny teny fototra. Andriamanitra mihitsy no voavela heloka. Betsaka ny olona mahalala an'io teny io, saingy tsy mino izy ireo fa Andriamanitra dia ampy hamela ny helony. Mbola mahatsiaro tena ho meloka ihany ianao. Mbola matahotra ny fisehoan'Andriamanitra sy ny andro fitsarana izy ireo. Fa Andriamanitra efa niseho talohan'izay - amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Tsy tonga hanameloka izy, fa ...
«Ho avy ny fitsarana! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha dieny izao fa ho any amin'ny afobe ». Angamba efa renao ireo na teny mitovy amin'izany avy amin'ireo evanjelista mihiaka. Ny tanjony dia ny: Mitaona ny mpanatrika hanolo-tena ho an'i Jesosy amin'ny tahotra. Ny teny toa izany dia mamily ny filazantsara. Angamba tsy dia lavitra loatra amin'ny sarin'ny "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny Kristiana maro tamim-pahatsiravina nandritra ny taonjato maro, indrindra fa tamin'ny Moyen Âge. Afaka mahita sary sokitra sy sary hoso-doko maneho ny olo-marina mitsingevana mankany an-danitra hihaona amin'i Kristy ianao sy ilay tsy marina taritin'ny demonia masiaka any amin'ny helo. Ny Fitsarana Farany kosa dia ampahany amin'ny fotopampianarana "zavatra farany". - Mampanantena ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina, ny faran'ny tontolon'ny ratsy ankehitriny, izay hosoloin'ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra. Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olombelona Ny tantara dia manomboka alohan'ny famoronana ny tontolontsika. Andriamanitra dia Ray, Zanaka ary Fanahy eo amin'ny fiarahamonina, miaina mandrakizay, ...
Ny akofa no akorandriaka ivelan'ny voa izay tsy maintsy sarahina ka azo ampiasaina ny voam-bary. Matetika izy io dia heverina ho vokatra fako. Nokosehina ny voa mba hanesorana ny hoditr'omby. Nandritra ny andro talohan'ny fanodinana mekanika, ny voamadinika miaraka amin'ny akofa dia nosarahana tsirairay tamin'ny fanipazana azy ireo hatrany amin'ny rivotra mandra-pivoahan'ny rivotra ny akofa. Ny katsaka koa dia ampiasaina ho fanoharana amin'ireo zavatra tsy misy dikany ary mila ariana. Mampitandrina ny Testamenta Taloha amin'ny fampitahana ny ratsy fanahy amin'ny akofa aelaka. "Fa ny ratsy fanahy tsy mba toy izany, fa tahaka ny akofa aelin'ny rivotra" (Sl 1,4: 3,11). «Izaho manao batemy anao amin'ny rano amin'ny fibebahana; fa Ilay ho avy aoriako (Jesosy) mahery noho izaho, ary tsy mendrika hitondra ny kirarony aho; Izy hanao batemy anao amin'ny Fanahy Masina sy ny afo. Eo an-tànany ny scoop ary hanavaka ny varimbazaha amin'ny akofa izy ary hanangona ny variny ao am-bala; fa ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mety maty. ”(Mt 12). Nanamafy i Joany Batista fa i Jesosy no ...
Rehefa mamaky Baiboly isika dia sahirana vao mahatakatra izay rehetra nolazain'i Jesosy. Fanambarana izay miverimberina hatrany dia azo vakiana ao amin'ny Evanjelin'i Matio: "Fa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany" (Mt 19,30 LUT). Toa manandrana hatrany i Jesosy hanakorontana ny filaminan'ny fiarahamonina, hanafoana ny toerana misy azy ary hanao fanambarana mampiady hevitra. Ny Jiosy tamin'ny taonjato voalohany tany Palestina dia nahalala tsara ny Baiboly. Ireo mpianatra ho tonga mpianatra dia niverina nanjary very hevitra sy sosotra noho ny fihaonany tamin'i Jesosy. Na izany na tsy izany, ho azy dia tsy niara-nandeha ny tenin'i Jesosy. Ny raby tamin'izany fotoana izany dia nohajaina indrindra tamin'ny hareny, izay noheverina ho fitahian'Andriamanitra. Ireo dia anisan'ny "voalohany" teo amin'ny tohatra ara-tsosialy sy ara-pinoana. Tamin'ny fotoana iray hafa, dia nilaza tamin'ny mpihaino azy i Jesosy hoe: “Any ny tomany sy ny fikitroha-nify, rehefa mahita an'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa horoahina hiala! Ary ho tonga avy any atsinanana sy avy andrefana, avy any avaratra sy atsimo, ary eo amin'ny latabatra ireo ...
Ny fiainana amin'ny fahasoavana dia midika hoe mandà, tsy mandefitra, na manaiky ota. Andriamanitra dia manohitra ny ota - mankahala azy Izy. Tsy nety nandao antsika tamin'ny toetrantsika mpanota Izy ary naniraka ny Zanany hanavotra antsika aminy sy ny vokany. Rehefa niresaka tamin'ny vehivavy nijangajanga i Jesosy dia hoy izy taminy: "Tsy mitsara anao koa aho", hoy ny navalin'i Jesosy. Afaka mandeha ianao, nefa aza manota intsony! " (Jo 8,11 HFA). Ny fijoroana ho vavolon'i Jesosy dia maneho ny fanaovana tsinontsinona ny ota ary manome fahasoavana izay mifanatrika amin'ny ota amin'ny fitiavana manavotra. Fahadisoana mahatsiravina ny mahita ny fahavononan'i Jesosy ho tonga Mpamonjy antsika ho fandeferana amin'ny ota. Ny Zanak'Andriamanitra dia tonga iray taminay satria tsy nilefitra tanteraka tamin'ny herin'ny fahotana mamitaka sy manimba izy. Raha tokony hanaiky ny fahotantsika izy, dia noraisiny ho eo aminy izany ary natolony tamin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tamin'ny alàlan'ny fahafoizan-tenany dia voafafa ny sazy, ny fahafatesana izay entin'ny ota amintsika. Rehefa mijery ny tontolo lavo iainantsika isika ary rehefa mihetsika amin'ny fiainantsika manokana ...
Ny fibebahana dia midika hoe: miala amin'ny ota, mitodika any amin'Andriamanitra!
Fibebahana, fibebahana, fibebahana (nadika koa hoe "fibebahana") manoloana ilay Andriamanitra be fahasoavana dia fiovan'ny toe-tsaina, nateraky ny Fanahy Masina ary miorim-paka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny fibebahana dia mitaky fahatsiarovan-tena amin'ny fahotan'ny tena ary miaraka amin'ny fiainana vaovao nohamasinin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny mibebaka dia mibebaka sy mibebaka.
"Fa hoy i Samoela tamin'ny mpianakavin'ny Isiraely rehetra: Raha te hitodika amin'i Jehovah amin'ny fonareo rehetra ianareo, dia ario ny andriamani-kafa sy ny rantsan-tenanareo, ary atodiho amin'i Jehovah ny fonareo, ka manompoa azy irery ihany, dia izy hanafaka anao amin'ny tànan'ny Filistina » (1 Samoela 7,3).
«Hofafako toy ny rahona ny helokao ary tahaka ny zavona ny fahotanao. Mitodiha aty amiko fa hanafaka anao aho. " (Isaia 44.22).
«Mitodiha amiko, dia ho voavonjy ianao, ry faran'izao tontolo izao; satria Andriamanitra aho fa tsy olon-kafa " (Isaia 45.22).
«Mitadiava an'ny Tompo dieny mbola hita Izy; miantso azy raha mbola akaiky izy » (Isaia 55.6).
«Miverena, ianareo zanaka mpivadi-pinoana, ary hositraniko ianareo amin'ny tsi-fanarahanareo. Indreo, manatona anao izahay; satria Ianao no TOMPO Andriamanitray » (Jeremia 3,22).
«Te hanome azy ireo fo aho mba hahalalan'izy ireo ahy fa Izaho no Tompo. Ary izy ireo ho oloko, ary Izaho ho Andriamaniny; satria hitodika amiko amin'ny fony rehetra izy » (Jeremia 24,7).
Tsy maintsy reko ny fitarainan'i Efraima: Nofaizanao aho, ka nohararaotina toy ny omby tsy mbola voafolaka. Raha manova ahy ianao dia hiova fo; satria Ianao, Tompoko, no Andriamanitro! Rehefa avy niova fo aho dia nibebaka, ary rehefa tonga tao amin'ny Understanding dia nidaroka ny tratrako. Menatra sy mangaihay eo aho; fa izaho mitondra ny henatry ny fahatanorako Moa tsy zanako malalako sy Efraima malalako Efraima? Satria isaky ny mandrahona azy aho dia tsy maintsy tadidiko izy; izany no mahatonga ny foko torotoro, ny tokony hamindrako fo aminy, hoy ny Tompo » (Jeremia 31,18-20).
«Tsarovy, Tompoko, ny toetray; jereo ka izahao ny fahafaham-boninahitray. (Fitomaniana 5,21).
«Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: Raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny lalàko rehetra ary manao izay mahitsy sy mahitsy, dia ho velona izy fa tsy ho faty. Ny heloka rehetra vitany tsy tokony hotsarovana intsony, fa tokony ho velona kosa noho ny fahamarinana izay nataony. Heverinao va fa faly amin'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy aho, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy? (Ezekiela 18,1: 21 sy 23).
Ary noho izany dia hotsaraiko ianareo, ry taranak'Isiraely, samy araka ny làlany avy, hoy Jehovah Tompo. Mibebaha, ka mivadia amin'ny fahadisoanao rehetra, mba tsy ho meloka ianao noho izany. Ario hiala ny tenanareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao. Fa nahoana ianareo no te ho faty, ry mpianakavin'i Isiraely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy ny Tompo Andriamanitra. Noho izany miova ary miaina toy izao » (Ezekiela 18,30: 32).
Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, tsy sitrako ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hiala amin'ny làlany ny olona ratsy fanahy ka ho velona. Mialà amin'ny lalan-dratsinao ankehitriny. Nahoana no te-ho faty ianareo, ry mpianakavin'i Isiraely? " (Ezekiela 33,11).
«Hiverina ianao miaraka amin’Andriamanitro. Tano mafy ny fitiavana sy ny fahamarinana ary manantenà an'Andriamanitrao mandrakariva. " (Hosea 12,7).
"Nefa na dia izao aza, hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonao rehetra amin'ny fifadian-kanina, amin'ny fitomaniana, amin'ny fitomaniana!" (Joela 2,12).
"Nefa lazao aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro: Miverena amiko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, dia hiverina aminareo aho, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. (Zakaria 1,3).
«Tamin'izany andro izany dia tonga i Joany Batista nitory tany an-efitr'i Jodia nanao hoe: Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa io Ilay notenenin'i Isaia mpaminany io sy nolazainy (Isaia 40,3): Misy feon'ny mpitory teny an'efitra hoe: amboary ny lalana ho an'ny Tompo ka ataovy izay alehany! Fa izy Johannes kosa dia nitafy lamba volon-drameva sy fehikibo hoditra tamin'ny valahany; fa valala sy tantely remby no fihinany. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra ary ny tany rehetra any amoron'i Jordana dia nankeo aminy ka natao batisa tao amin'ny ony Jordana, rehefa niaiky ny fahotany. Ary nony nahita ny Fariseo sy ny Sadoseo maro nanatona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: Ry bibilava, iza no nanamafy ny tenanareo fa ho afaka amin'ny fahatezerana ho avy ianareo? Jereo, mamoa voa marina amin'ny fibebahana! Aza mieritreritra fotsiny fa afaka miteny anakampo ianao hoe: Manana an'i Abrahama ho Raintsika isika. Fa lazaiko aminareo: Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ny famaky dia efa napetraka amin'ny faka-kazo. Noho izany: ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ary hatsipy any anaty afo. Izaho manao batemy anao amin'ny rano amin'ny fibebahana; fa izay ho avy aoriako dia mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kirarony aho; Izy hanao batemy anao amin'ny Fanahy Masina sy ny afo. Eo am-pelatanany ny scoop ary hanavaka ny varimbazaha amin'ny akofa izy ary hanangona ny variny ao am-bala; fa ny akofa kosa dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. " (Matio 3,1: 12).
"Hoy Jesosy: Lazaiko aminao marina tokoa: Raha tsy mibebaka ianareo ka tonga tahaka ny zaza, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra" (Matio 18,3).
"Ary tany an-efitra Jesosy, nanao batisa sy nitory ny batisan'ny fivalozana ho famelan-keloka" (Marka 1,4).
«Fa rehefa afaka i Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara! " (Marka 1,14-15).
"Izy no hampiova fo ny isiraelita maro ho an'i Jehovah Andriamaniny" (Lioka 1,16).
"Tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota hibebaka" (Lioka 5,32).
"Lazaiko aminao fa hisy fifaliana bebe kokoa any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny olona marina sivy amby sivi-folo izay tsy mila fibebahana" (Lioka 15,7).
"Ary lazaiko aminareo fa misy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka" (Lioka 15,10).
Momba ilay zanaka adala
«Hoy Jesosy: Nisy lehilahy nanan-janaka roa lahy. Ary hoy ny zandriny tamin-drainy: Omeo ahy, ry raiko, ny fananako. Ary nozarainy taminy ny habakoka sy ny tany. Ary tsy ela taorian'izay dia nanangona ny zavatra rehetra ilay zandriny ka nifindra tany an-tany lavitra; ary tao no nitondrany ny lovany tamin'ny tenim-pianakaviana. Saingy rehefa laniny avokoa ny zava-drehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ary nanomboka noana izy ary nandeha nifikitra tamin'ny olom-pirenenan'io firenena io; nalefany tany an-tsahanany hikarakara ny kisoa. Ary naniry ny hameno ny kibony tamin ’ny polongitra nohanin’ ny kisoa izy; ary tsy nisy nanome azy. Ary tonga tao am-pony izy ka nanao hoe: Andro firy ny mpiasa an-draiko, izay manan-kanina be, nefa maty mosary eto aho! Hitsangana aho ka hankany amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy taminao aho. Tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony aho; ataovy toy ny iray amin'ny mpiasao andro aho! Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra be izy, dia hitan'ny rainy ary nitomany izy, dia nihazakazaka izy ka namihina ny vozony ary nanoroka azy. Ary hoy ilay zanany taminy: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo alohanao aho; Tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony aho. Fa hoy kosa ny rainy tamin'ny mpanompony: Ento haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony, ary ento ny zanak'omby nafahy, dia vonoy; andao hihinana dia hifaly! Fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray; very izy fa hita indray. Ary nanomboka faly izy ireo. Fa ilay lahimatoa kosa dia tany an-tsaha. Ary rehefa mby teo akaikin'ny trano izy, dia nahare nihira sy nandihy ary niantso ny mpanompo iray hanontany azy hoe: Inona izany? Ary hoy izy taminy: Tonga ny rahalahinao; ary ny rainao namono ny zanak'omby nafahy satria efa tafaverina tsara. Tezitra izy ary tsy te hiditra ao anatiny. Dia nivoaka ny rainy nanontany azy. Fa namaly izy ka nanao tamin-drainy hoe: Indro, efa nanompo anao an-taonany maro aho ary tsy nandika ny didinao na oviana na oviana, ary mbola tsy nanome osy ho faly amin'ny namako akory ianao. 30 Fa ankehitriny, raha avy ny zanakao-lahy, izay nandany ny habakoka taminao sy ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia novonoinao ho azy ny zanak'omby nafahy. Fa hoy izy taminy: Anaka, ato amiko foana ianao, ary izay ahy rehetra dia anao. Fa tokony ho faly sy ravoravo ianao; satria ity rahalahinao maty ity, fa velona indray, very, ary hita indray » (Lioka 15,11-32).
Ilay Farisianina sy mpamory hetra
«Ary niditra tao Jeriko izy ka namaky. Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, lohan'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary naniry hahita an'i Jesosy izy, nefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny vahoaka. fa kely volo izy. Ary nihazakazaka nialoha izy ary nananika aviavy hizaha azy; satria eo no tokony handalovany. Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra izy ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; satria tsy maintsy mijanona ao an-tranonao aho anio. Ary nidina faingana izy ary nandray azy tamim-pifaliana. Ary raha nahita izany izy rehetra, dia nimonomonona ka nanao hoe: "Miverina amin'ny mpanota indray Izy." Fa tonga Zakaiosy ka nanao tamin'ny Tompo hoe: Tompoko, homeko ny malahelo ny antsasaky ny fananako; ary raha namitaka olona aho, dia averiko inefatra. Fa hoy Jesosy taminy: Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy koa dia zanakalahin'i Abrahama. Fa tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very » (Lioka 19,1-10).
«Ary hoy Izy taminy: Voasoratra hoe: Kristy hijaly ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; ary ny fibebahana dia torina amin'ny anarany ho famelana ny fahotana amin'ny olona rehetra. " (Lioka 24,46-47).
"Ary hoy Piera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao Batemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina" (Asan’ny Apostoly 2,38).
“Marina fa Andriamanitra dia tsy niraharaha ny fotoanan'ny tsy fahalalana; fa izao kosa dia mandidy ny olona hibebaka rehetra izy amin'ny lafiny rehetra » (Asan’ny Apostoly 17,30).
«Sa manamavo ny haren'ny fahasoavany, ny faharetany ary ny fahari-pony ianao? Tsy fantatrao va fa ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia mitarika anao hibebaka? " (Romana 2,4).
"Ny finoana dia avy amin'ny fitoriana, fa ny fitoriana amin'ny tenin'i Kristy" (Romana 10,17).
"Ary aza mampitaha ny tenanao amin'ity tontolo ity, fa miovà amin'ny fanavaozana ny sainao hahafahanao mandinika izay sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sy mahafinaritra ary tonga lafatra" (Romana 12,2).
«Ka faly aho izao, tsy hoe ory ianao, fa nalahelo ny hibebaka. Fa nampahory araka ny sitrapon'Andriamanitra ianareo, ka tsy nisy naratra taminay » (2 Korintiana 7,9).
"Fa izy ireo ihany no manambara ny aminay izay lalana hitanay niaraka taminao, sy ny fomba niovanao ho an'Andriamanitra, lavitra ny sampy, hanompoan'Andriamanitra velona sy tena Andriamanitra." (1 Tesaloniana 1,9).
«Fa ianareo dia tahaka ny ondry nania; fa ianareo kosa niverina tamin'ilay Mpiandry sy Evekan'ny fanahinareo » (1 Petera 2,25).
"Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra" (1 Jaona 1,9).